င ကို ပေါင်းပါ – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » င ကို ပေါင်းပါ – KZ’s ထမင်းဆိုင်	39
Posted by ဇီဇီ on Oct 12, 2015 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, How To.. | 39 comments
ငါ့ ကို မပေါင်းချင်ရင်တော့ ငါး ကို ပေါင်းရအောင်။
ထုံးစံအတိုင်းးးးစားဖိုမှူးဘယ်သူတွေတုန်း ကြည့် ကြည့်…!!
၁) ခရစ်နဲ့ ပေါင်း အဲလေ ခရစ် နည်းနဲ့ ပေါင်းရအောင်။
၂) ဦးကျောက်ခဲ နည်း ပေါင်းကြမယ်။
ကကတစ်ကို အကောင်လိုက် ကျောဘက်ကနေ တစ်ခြမ်းခွဲ…
ဂျင်းရည် နှမ်းဆီ ဆား/သကြားသဘောလောက် ပဲငံပြာရည်အကြည်နဲ့နှပ်ထား…
စားခါနီးမှ ပန်းကန်ထဲ စပါးလင်ခံ နှပ်ထားတဲ့ငါးကိုတင် ၊
ကြက်သွန်နီဥသေး (မီးကင်ရင် ပိုကောင်း) ကြက်သွန်ဖြူ ထူထူလှီးထားတာတွေတင် ၊
ပြီးမှ ငရုပ်စိမ်း နံနံပင် ကြက်သွန်မြိတ် ကြိုက်တတ်ရင် ရှောက်ဘီလူးရွက် ရှမ်းနံနံအပေါ်ကတင်ပြီး သံပုရာရည်ညှစ် ၊
သံပုရာသီး အကွင်းလိုက် အလှဆင်…
၃) ဝေ့ ရဲ့ Easy ပေါင်းနည်း ကတော့
ကကတစ်ငါးကို ဆား၊ ဂျင်းရည်၊ ပဲငံပြာရည်အကြည်၊ နှမ်းဆီနဲနဲနဲ့ခဏနယ်ထားတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီးစိမ်း ထောင်းပြီး သံပုရာရည်နဲ့ဆား သကြားထည့်ပြီး ငါးပေါ်လောင်းတယ်။
ငါးအောက်က စပါးလင်ခံပြီး ကြွေပန်းကန်ထဲထည့် ဇကာပေါ်တင်ပြီး ပေါင်းထားလိုက်ပြီ။
၄) မွဘုတ်ရဲ့ Hakka ငါးပေါင်းနည်း
မြက်စားငါး သို့ ငါးကြင်း အမှန်က ဘာငါးဖြစ်ဖြစ်ပါ။
ငါးကို သန့်စင်ပြီး ငရုပ်ကောင်း နဲ့ ဖြူးထားပါ
ငါးဗိုက်ထဲကို ငရုပ်ကောင်း နည်းနည်း ချင်းကြိတ်ဖတ်နဲ့ ကြက်သွန်မိတ် တစ်ပင် နံနံပင်အမြစ် ရှိရင်ထည့်
ငါးအတွက် sauce ချက်ရန် ကြက်သွန်ုဖြူ ဆီ ထဲ အကြွပ်ကြော် ပါ.. အကြွပ်ဖတ် ကိုဖယ်ထားပါ .. ကြက်သွန်ဖြူဆီထည့် နှမ်းဆီ၊ ခရုဆီ၊ ငါးငံပြာရည်၊ ပဲငံပြာရည်၊ ဟင်းချက်ဝိုင် အနည်းငယ်စီ သင့်အောင်ထည့်
ငါးပေါ်က လောင်းချပြီး ၁၀ မိနစ် .. အကောင်ကြီးရင် ၁၅ မိနစ်ပေါင်းပါ
ငါးအပေါ်မှဖြူးရန် ကြက်သွန်မိတ် တစ်လက်မခန့်ုဖြတ်ပြီးတာနဲ့ အရှည်လိုက် အမျှင်လှီး ရေစိမ်ထား
သတိ၊ ဆား အချိုမှုန့် မပါ
သံပုရာမှ မဟုတ် ချင်းကလည်း အဆီကျပါကြောင်း
ဆိုင်တွေမှာတော့ ငါးပေါင်းရည်တွေ သွန်ပစ်ပြီးမှ
သံပန်းကန်ပြား ပေါ်တင်ပြီး မီးဖိုနဲ့ပေးတာမို့ အမြင်မှာ လှလည်းလှ စားရင်းနဲ့ အရသာလည်း တဖြေးဖြေးဝင်နေတာပေါ့
အိမ်မှာကတော့ တစ်ခါတည်းပဲရောပေါင်း လိုက်ပါတယ်
၅) မွမိုးခိုင်ရဲ့ အလွယ်ဆုံးနည်း
၆) မွသဲ ရဲ့ ငါး ဝီစကီပေါင်း
ငါး သင့်တော်ရာ ငါးကြင်း ကက္တစ် အဆင်ပြေရာ ကို ဂျင်းရည် ကြက်သွန်ဖြူရည် ခရုဆီနဲ့နယ်
အာလူးကိုအခွံခွာ ပါးပါးအဝိုင်းလေးဒေလှီး ဆားနယ်
သရီးအင်ဝမ်း အရည်လဲရ အာလူးလဲပါ
(ဘူ့မှ မပြောနဲ့ တညားက ဝီစကီ ၂ ပက်လောက်ထည့်တယ်)
၇) မွနိုလှလှ ငါးလှလှပေါင်း ငါးပေါင်း+ ချိုချဉ် ဟင်းရည်မွှေး
ငါးပေါင်းကနေစမယ်နော် ( ချိုချဉ်ဟင်းရည်) – ငါးကတော့ (ကကတစ်/ စလားပီးယား/ ငါးပါနီ) မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ငါးအကောင်လိုက်ဝယ်ဖို့လိုပါတယ်
ဂျင်: – လက် ၂ဆစ် ((20 ဂရမ်)
ငါးကို အကြေခွာ ဗိုက်ခွဲကလီစာတွေ ဗဟတ်ထုတ် အကောင်မပျက်စေနဲ့နော်
မှို (ကောက်ရိုး / ငွေနှင်း / ပင်အပ် ) ကြိုက်ရာကို ရေဆေးပြီး အသင့် စားအရွယ်လေးတွေဖြစ်အောင် လှီးထားပါ
ငုံးဥ ပြုတ်ပြီး အခွံခွါထားပါ
ချဉ်စော်ခါးသီးခြောက် – ၂ကျပ်ခွဲသား (40 ဂရမ်) ကိုရေ1လီတာဖြင့်ပြုတ်ပါ
ကြက်သွန်နီ ကို အခွံခွာအတုံးလေးတွေတုံးထားပါ
ကြက်သွန်ဖြူ အခွံခွါပြီး တံပြားရိုက်ထားပါ
ဂျင်း အခွံခွာပြီး အပြားလိုက် ပါးပါးလေးလှီးထားပါ
ပင်စိမ်း / ရှမ်းနံနံ ကို ဆေးကြောသန့်စင်ထားပါ
စပါးလင် ဆေးကြောသန့်စင် အရင့်တွေဘယ်ပြီး အနုတွေကို ပါးပါးတစ်စောင်းလေးတွေလှီးထားပါ
၈) တညားရဲ့ ငါး ဖြစ်ကတဲ့ဆန်းပေါင်း
တွေ့တဲ့ငါး အကြေးခွံ ချွတ်ပြီး ဆား ငံပြာရည်နဲ့ နယ်ထား
ဂျင်းရယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူရယ်ထောင်း အရည်ညှစ်ထည့်
ငရုတ်သီးစိမ်းကို ထောင်းပြီး ခုနက ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူဖတ်တွေကို ငါးပေါ်ဖြူးပြီး
Kaung Kin Pyar says: ဆိုင်တွေမှာ ငါးသံပုရာပေါင်းဆို.. ဈေးကို သောင်းဂဏန်းယူတာ… (Feel ပိုဆိုးသေးး)
နောက်တစ်ပတ် ပိတ်ရက်.. ပေါင်းဖြစ်အောင် ပေါင်းမယ်….
မီးဖိုခန်း ရှုပ်ဖို့သာ ပြင်တော့…
(မနေ့က ရုံးမှာမြင်ပြီး အာလူးသုပ် လုပ်လိုက်တာ ထည့်တဲ့ ပဲကြာဇံက ပိုများတော့ ပဲကြာဇံသုပ်ဖြစ်သွားတယ်…။ ဒီငါးပေါင်းတော့ အကောင်မပျက်လောက်ဘူး ထင်တာပဲ…. )
ဇီဇီခင်ဇော် says: အားမငယ်နဲ့။
အကောင်ပျက်တော့လည်း လှအောင်လှီးပြီး ပြင်ဆင်ပလိုက်။
စားဖိုမှူးတွေ ပေါင်းတော့လည်း လွယ်နေရောပဲ။
တောင်ပေါ်သား says: ( ၆) မွသဲ ရဲ့ ငါး ဝီစကီပေါင်း ) အဲသဟာ စမ်းဦးမယ် ၊ ၂ ပက်တော့ ရင်းရမှာပေါ့လေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: နှမြောစရာကြီးနော်။
Kaung Kin Pyar says: ၂ ပက်မက ပိုထည့်ပြီး ငါးစားရင်း မူးနေမှာမြန်းးးးး လို့…
တောင်ပေါ်သား says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: ယူအက်စ်က ငါးတွေက.. ရေခဲရိုက်ထားတာတွေများတော့.. ဒိုက်စော်လိုလို.. ဘာလိုလိုအနံ့ထွက်တွေ တော်တော်များသဗျ..။
အဲဒါကို.. ဘယ်လိုဖျောက်ရမလဲ.. သိချင်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1241
Novy says: ရှာလကာရေကို ရေရောပြီး ငါးကို 5မိနှစ်လောက်စိမ်ပြီးပြန်ဆေးလိုက်ရင် အနံ့ပျောက်ပါတယ်
ဦးကြောင်ကြီး says: အနော်ကြောင်ကြီးကို အဲလိုဆေးပီး ဆားပါလား မားနိုဂျီး
Novy says: ကိုခင်ဇော်ရယ် ဓါတ်သေတွေပျောက်သွားတာနာသကွယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟုတ်ပါ့ မွနိုရယ်။
မြစပဲရိုး says: ဒီမှာ ပေါင်းဖို့ င က အကောင်လိုက် ရှားတယ်။ ဝေးဝေးကဘဲ လွမ်းပါတော့မယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ငါးပိုင်းတွေကိုလည်း ပေါင်းလို့ ရတယ် အရီးရဲ့။
Yin Nyine Nway says: ရခိုင်မှာ ငါးသလောက်ပေါင်းကျွေးတာအရမ်းကောင်းတယ် ငရုတ်ကောင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ပေါင်းတာ ခု မမရဲ့ ငါး ပေါင်းစားကြည့်အုန်းမယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: အမက ငါးသလောက်ပေါင်းကို အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ခုပေါင်းတာတွေက ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်ပေါင်းတွေ ဦးစားပေးထားတာ။
HMM says: ငါးဆိုအရိုးကြောက်လို့ ဝေါင်ဝေါင်ရှေး ဝေးဝေးရှောင်.. :P
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဟိုလို ပေါင်းအိုးနဲ့ ပေါင်းရင်တော့ အရိုးပါ နူးပြီး စားလို့ရတယ်လေ။
HMM says: အရိုးနူးပေါင်းထားတဲ့ငါးအနံ့က အီလည်လည်ဂျီးမို့ မကြိုက် ငါးဆို ညှီရင်မစား အရိုးများရင်မစား အကြေးခွံမစင်ရင်မစား ချက်တဲ့စတိုင်မကြိုက်ရင်မစားနဲ့ ဂျီးများလွန်းလို့ ငါးရှောင်တဲ့ဘွရောက်ကြောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: င (ငါ့) ကိုပေါင်းပါလို့များ ပြောသလားလို့။ အီးဇီးတာနဲ့ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း ၂နည်းကို ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားတယ်။
ဇီဇီခင်ဇော် says: စားဖိုမှူးတွေ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ငါး ပေါင်းစားကြတာနဲ့ မပေါင်းရသေးသူတွေပါ ဇွတ်ပေါင်းခိုင်းပြီး ဓာတ်ပုံတွေပါ မ လာတာ မမရေ။
Alinsett @ Maung Thura says: .ဖွေးဖွေးကို ပေါင်းပြီး စားချင်တယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဖွီးဖွီး အသား ခါးလှတယ်
surmi says: အပြင်မှာ ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ကြမယ်လေ ……
ဘယ်လိုလဲ စိန်ရဲ လား Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: စိနျလိုကျလေ။
pooch says: အမေနဲ့ အဒေါ်ကတော့ ပေါင်းကျွေးပါတယ် သူတို့သာဆို ပိုသိမယ်
ကိုယ်ကတော့ စားကောင်းရင် စားလိုက်တာပဲ ချက်ချင်သလိုသာချက် အကုန်စား အကုန်ကြိုက် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: အဲဒီလို စိတ်ရှိလည်း အေးဒါဘဲ။
@QUIL@ says: အို…
ယွံ ဇာ ကောင်းထွာ…။
ထွီ ..ထွမ်.. အော့ အော့ …။
frutti di mare…..
ဇီဇီခင်ဇော် says: သူများး စားးတာတွေ ရွံတယ်ဆိုတော့
သူများး ရွံ သရာတွေ မှ စားးချင်တဲ့ သူပေါ့ ခိခိ
kai says: ဇီမမရေ..
ဒီလ.. ရွေးကောက်ပွဲလ.. ငါးပေါင်းရွေးမယ်နော…
ပေါင်းတယ်ဆိုတော့.. နိမိတ်ကောင်းပေါ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
Topping တွေကတော့ ပြုစုတုန်းမို့။
kai says: ရေခဲရိုက်ထားတဲ့.. ငါပုဏ္ဍား၃ကောင်ဝယ်ထားတယ်..
ငါးတွေမသက်သာဘူးသာ ..မှတ်ပေတော့… လို့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
ဇီဇီခင်ဇော် says: http://mandalaygazette.com/216269
ဒီ ပို့(စ) အပါအဝင် အခု ပြောတဲ့ ၃ ပို့(စ) စုစုပေါင်း ၄ ပို့(စ) လုံး ငါးချည်းပဲ။
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဒါတွေ ရှောင်ရမှာပေါ့ တဂျီး က/
kai says: အသားမစားတော့တာက.. ကောင်းမယ့်ပုံ…
အောင် မိုးသူ says: သံပုရာသီးနဲ့ပေါင်းတဲ့ ချဉ်စပ်စပ်လေးကို ကြိုက်တယ်
ဇီဇီခင်ဇော် says: မိုးအေးအေးလေးနဲ့ စားချင်လာပြီ
ကျောက်စိမ်း တိန်ညင် says: ငါးပုတ်သင်ပေါင်း(သဌေးစာ)
၃၅ကျပ်သားကောင်လောင်ဆို ၂၀၀၀၀/- လောက်ပေးရမယ်
အဲ့၅မျိုးကို မီးပြင်းထဲ ထည့်လှော် ၁မိနစ်ခွဲလောက် …. ပြီးရင် မညက်တညက်ထောင်း ဆီလေးနည်းနည်းထည့်နယ်(မြေပဲဆီ)
ငါးကို သန့်စင်ပီး ရေစစ်ထား ဗိုက်ထဲ အဲ့အနှစ်ထည့် … ခဲပြားပဲပီး မိုက်ခရိုဝေ့ထဲ ၃/၄မိနစ်လောက်ထည့်လိုက် ရပီ
မှတ်ချက်။ ။ အနှစ်ကိုမစားရ ….
(ကိုယ်ကြိုက်မဲ့ အချဉ်ဆော့လေးသုံးပီး ငါးအသားကိုစားပါ)
ငါးရံ့စပ်စလူးပေါင်း(င ဟာ ငါ နာမည်ပေးထားတာ) ငါးရံ့ ၂၅ကျပ်သား
မြေပဲ (အစိမ်းကို ၄စိပ်ကွဲလှော်ထောင်း)
ရေဆေးသန့်စင်ပီးရင် ငါးရံ့အူလေးပါ (သန့်စင်ပီး) ဗိုက်ထဲပြန်ထည့်ပေး
အပေါ်ကဟာတွေကို ရောနယ် ဗိုက်ထဲလည်းထည်း အပြင်မှာလည်းပုံ
ပီးရင် ခဲပတ်ပီး ဆော်လဘန်တေလိုက်တော့ ၃/၄မိနစ်ဆိုရပီ
စကားမဆီမဆိုင် ….. ငဒို့ သဂျီးက သူများထက်ထူးတယ် …..
ငါးပုဏ္ဏား ၃ ကောင် ပေါင်းစားမယ် ဆိုလားပဲ … အေးပေါ့လေ သူတို့ ယူအက်စ်က ငါးပုဏ္ဏားက ၁တောင်လောက်ရှိလားမှ မသိတာ …
ကိုယ်တွေဆို ကိုလက်စထော မတက်အောင် ငါးသလဲထိုးတနေ့ ၁ကောင် ပေါင်းစားပြိုက်မှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12398
နာ က ငါးမကျွမ်းဘူးကော။
ဘယ်ငါးပြောလို့ ဘယ် အရွယ်မှန်းမသိဘူး
kai says: တကောင်တညိုလောက်ကလေးတွေပါကွယ်….။
ဘယ်ချောင်ကပ်သွားမှန်းတောင်မသိ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.